म कसरी आफ्नो वर्तमान एसईओ स्कोर जाँच गर्न सक्छु?
म प्राय: वर्तमान प्रगतिको परीक्षण गर्न वा वेबसाइटको अनुमानको बारेमा प्रश्नहरू सुन्दैछु एसईओ आफैं स्कोर गर्छु. तर के तिनीहरूले कुनै पनि अर्थ बनाइरहेका छन्? स्पष्ट रूपमा बोल्दै, मलाई यकीन छैन कि यदि कुनै राम्रो छ, वा कुनै खराब एसईओ स्कोर सबै पछि. वास्तव मा, खोज इञ्जिन अनुकूलन को अवधारणा धेरै नै महत्वपूर्ण छ, हरेक व्यावहारिक रणनीति को धेरै पहलुओं संग आफ्नो वेबसाइट को अनलाइन रैंकिंग मा असली सफलता को लागि ड्राइव को लागि शुद्ध रूप देखि स्पष्ट समझ को आवश्यकता संग. खैर, यो एसईओ स्कोर मापन को बारे मा प्रश्न को जवाब लगभग जस्तो अप्रासंगिक हुन्छ जस्तो देखिन्छ - casselin cdec15. वास्तवमा, खोज ईन्जिनियरिङ् द्वारा बनाईएको कुनै साझा ड्याशबोर्ड छैन हामीलाई हामीलाई कुनै पनि व्यक्तिगत वेबसाइट को उद्योगको सेक्टरको सम्बन्धमा, वा कम्तिमा केहि समान बजार आला. र त्यहाँ सबैका लागि तुलनात्मक विश्लेषण गर्न कुनै पनि काम गर्ने उपकरणहरू वा एकीकृत प्लेटफार्महरू छैनन्: लिङ्कहरू, अन्य सामाजिक संकेतहरू, एसईओको मुख्य तकनीकी पक्षहरू, पृष्ठ-पेज त्रुटिहरू, पृष्ठ लोड गति, फरक ट्यागहरू उल्लेख गर्न र सामग्रीको गुणस्तर. त्यसोभए हामी कस्तो प्रतिक्रिया पाउन सक्छौं? हामी निश्चित गर्न एसईओ स्कोर संग के गर्न सक्छौं भनेर हेर्न कोसिस गरौं.
हामी तपाईंको वेबसाइट को आवश्यक तत्वहरूको तुलना गर्न सक्दछ एसईओ तपाइँको नजिकका प्रतियोगिहरूको विरुद्ध.
धेरै मूलभूत कुराहरु को बारे मा बोल्दै, म तपाईंको विरोधियों को केहि थोक डेटा को बिरुद्ध तपाईंको वर्तमान वेबसाइट को प्रदर्शन को तुलना गर्छन. हामी आफ्नो कार्बनिक ट्राफिक एक नै उद्योग भित्र लक्ष्य खोजशब्दहरु बाट आउन अध्ययन गर्न सक्छन्, साथ नै बजार दर्शकहरु यी कुञ्जी वाक्यांशहरू प्रयोग गर्दा उत्पादन वा सेवा खोज्दै. यो तरिका अभिव्यक्ति, तपाईं कम से कम सक्षम हुन सक्नुहुनेछ कि तपाईं सही ट्रयाकमा सार्दै हुनुहुन्छ, वा तपाइँले द्रुत समाधानका लागि विशेषज्ञहरू भाडामा लिन आवश्यक पर्दछ।. म यहाँ मतलब छ कि तपाईंको एसईओ काम आउटसोर्स्स प्राप्त गर्दा कहिलेकाहीँ राम्रो तरिकाले गठन हुन सक्छ, बाँच्नको मात्र निर्णय भन्न नसक्ने हो.
हामी तपाईका विरोधीहरूको उत्कृष्ट अनुभव अध्ययन गर्न सक्छौं र त्यसको आफ्नै प्रयोग गर्न निःशुल्क महसुस गर्न सक्नुहुन्छ.
म तपाईंको प्रतियोगीको प्रगति प्रगतिमा प्रमाण र केहि सफल अभ्यासहरूको लागी आवेदन गर्ने केहि स्पष्ट श्रेकको पत्ता लगाउने विश्वास गर्दछु सामान्यतया तपाईको एसईओ स्कोर सुधार गर्न एक राम्रो र स्पष्ट समाधान हो।. यद्यपि, म यहाँ कुनै प्रतिमा जस्तो अभिनय गरिरहेको छैन. केवल सबै भन्दा कुशल चीजहरूमा फोकस र तपाईंको वेब पेजमा जीवनलाई ल्याउन सुरु गर्नुहोस्. कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंको शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वीले केहि लोकप्रिय सोशल मिडियाबाट राम्रो फाइदा उठाउँदैछ. त्यसो भए किन सट्टा पछ्याउने र आफ्नो एसईओ स्कोरलाई प्रयोग गरीएको वस्तुहरू जस्तै जस्तै मनपर्ने, उल्लेख र फेसबुकमा शेयरहरू, उदाहरणको लागि ड्राइभ गर्नु हुँदैन?
हामी पत्ता लगाउन सक्दछौं कि तपाईका विरोधीहरूले निश्चित कुराको लागि गलत बाटोमा के गरिरहेका छन्.
कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक युद्धमा संलग्न हुन जस्तै, यो तपाईंको शत्रुको कमजोरीहरू बुझेर म्याच जित्न साँच्चै राम्रो विचार हुन सक्छ।. र यो योजना तपाईंको वर्तमान एसईओ स्कोर परिमार्जन गर्न कहिलेकाहीँ अधिक को लागी भावना को लागी गर्दछ. त्यसोभए, तपाईंको विरोधीहरूको मिल्दो कुनै पनि चीजको सही प्रयोग गर्न संकोच नगर्नुहोस् - यो उनीहरूको सामग्री रणनीति वा खोजी इन्जिन अनुकूलनको कुनै अन्य पक्ष हुनुपर्छ जुन तिनीहरू अझै पूर्ण भइरहेको छैन।.